Archives des Politika - Page 2 of 2 - Politika
Misy hatrany ny fironan-kevitra ny amin’ny fametrahana ny governemanta manana fahefana kokoa mihoatra amin’ireo antenimiera roa tonta, na inona na inona fitondrana mijoro. Toe-javatra izay miteraka fihenan-kasina amin’ny andraikitra maha…
Toy ny ahoana ny fomba fifandaminana anatin’ny parlemanta maneran-tany ? Inona no mety hanentana ny olom-boafidy hifandray ? Indro aroso etoana, ohatra valo mety hiteraka fomba fijery vaovao eo anivon’ny…
Hatramin’ny taona 60 no mankaty, dia lasa anjorombala ka tsy mba nisitraka asa fanatsarana na fanavaozana ny lapan’ny demokrasia eny Tsimbazaza, izay foiben’ny antenimierampirenena eto Madagasikara. « Zara raha nisy ny…
Andrimpanjakana voalohany tokony ho fitaratry ny mangarahara ny antenimierampirenena. Mbola mijanona ho tompon-trano mihono anefa ny vahoaka hatreto, na ny mikasika ireo parlemantera mandrafitra izany na ny zava-mitranga marina eo…
Miomankomana ny amin’ny fisafidianana ireo solombavambahoaka 151 hisolontena azy eny anivon’ny antenimierampirenena ny mpifidy ka hiatrika fifidianana ny 27 mey ho avy izao. Fotoana kosa izao hahafahana miresaka ny iray…
Mety hiteraka fikorontanana eo amin’ny parlemanta sy ny rafi-pahefana misy ny fampanantenana nataon’ny Filoha Rajoelina Andry nandritra ny fampielezan-kevitra dia ny hanafoanany ny antenimierandoholona.. Ady hevitra lalina anefa no mipetraka…